हाम्रो देशमा आत्म लगभग एक राष्ट्रिय परम्परा छ। धेरै मान्छे, unwell महसुस डाक्टर र जहाँ कि चिकित्सा किन्न फार्मेसी जाने छैन "उनको मित्र मदत गरेको छ।" एक निर्धारण बिना खरिद छन् भनेर भन्दा लोकप्रिय लागूऔषधको एक "Furosemide" को एक माध्यम हो। मुख को शब्द द्वारा प्रसारित छन् जो समीक्षा, उहाँलाई लगभग जादुई गुण पुरस्कृत गरियो। तर चाहे यो दबाइ अहानिकारक छ? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
"Furosemide" चक्की। गवाही
दबाइ को अन्तर्राष्ट्रिय र रासायनिक नाम सुनिन्छ रूपमा: "Furosemide"। sulfonamides बाट लिइएको हो जो पदार्थ, निर्देशन लेखिएको रूपमा, मजबूत diuretic वा, एकदम बस, बलियो, छ diuretic। सक्रिय घटक furosemide र कार्य सहायक मकै स्टार्च, म्याग्नेसियम steartat र लैक्टिक एसिड रूपमा छ। रूपमा ट्याब्लेटको को गठन को लागि आवश्यक छ उनि धेरै रूपमा थपिएका छन्। तयारी "Furosemide" मौखिक प्रशासन लागि विशेष निमित्त, त्यसैले, यो सेतो वा क्रीम-रंग ट्याब्लेटको को रूप मा उपलब्ध छ। निदान को एक किसिम मा दबाइ सल्लाह दिन्छन्। यसलाई प्रभावकारी कार्य:
, रक्त को एक रोगनिरोधी ठहराव हृदयघात आधारमा arising रूपमा।
उच्च रक्तचाप मा, जो को कारण ले cirrhosis छ।
मस्तिष्क को edema, फरक मूल को फोक्सोमा।
को premenstrual सिंड्रोम समयमा।
गुर्दे अपर्याप्तता मा (दुवै तीव्र र क्रोनिक)।
चिकित्सा "Furosemide" (यो कुरा मा डाक्टर को समीक्षा एकमत) उच्च दबाव, विषाक्तता barbiturates द्वारा कारण संकटहरूको रोक्न मद्दत गर्छ। डाक्टर ध्यान दबाइ को खुराक एक व्यक्ति रोगी आवश्यक चयन। कहिलेकाहीं निर्धारण बिना लिएको पनि एक ट्याबलेट, गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
रूपमा deystvet तयारी "Furosemide"? आफैलाई धेरै छिटो भन्न लागि समीक्षा यसलाई अनुभव गरेका छन्। पनि केवल एक ट्याब्लेट कार्य बारे चार घन्टा लाग्छ प्राप्त पछि। फलस्वरूप, शरीर पोटासियम को नाटकीय कम स्तर हुन, कक्षहरू भित्र तरल को मात्रा कम गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर सोडियम स्तर पर्छ। यो, बारी मा, कहिलेकाहीं उल्टी, चक्कर आना ठिक, अस्थायी दृष्टि वा सुनुवाइ को हानि गर्न वृद्धि दिन्छ।
अन्य पक्ष प्रभाव, कहिलेकाहीं चिकित्सा "Furosemide" कुनै पनि अंग गर्न निराशा, दबाव मा एक तेज ड्रप, वृद्धि रगत प्रवाह हुन सक्छ हुन सक्छ जो बीच (यो घटना "निस्तब्धता" भनिएको छ)। एकदम अक्सर, दबाइ लिए जो विरामीहरु "Furosemide" आफ्नो छाला बोधो छाला नै "हांस चलाउन धक्का" जस्तै, आफ्नो संवेदनशीलता हराउछ महसुस। फलस्वरूप, बारम्बार र प्रचुर मूत्र अलग गाउट, को अन्तस्करणले सम्बन्धित रोगहरु worsen गर्न सक्नुहुन्छ। कारण केही विरामीहरु मा साइड इफेक्ट को सम्भावित घटना गर्न कडाई ट्याब्लेटको को "Furosemide" प्रयोग निषेधित छ। डाक्टर को समीक्षा दबाइ contraindicated छ जोड:
जब मूत्र को बाधा।
बिगडा पानी नुन चयापचय, गाउट, stenosis भोगिरहेका।
हृदय रोग संग विरामीहरु धेरै।
माथि तीन वर्षसम्म बच्चाहरु।
Overdosing र अन्तरक्रिया अन्य लागूपदार्थको संग
अधिमात्रा को मामला अनियमित हार्टबिट, पानी-नुन चयापचय हुन सक्छ मा, रगत मात्रा मा कम। सायद दबाव र बेहोशी मा एक तेज ड्रप, hypotension एक परिणाम हो। औषधि "Furosemide" लिथियम संग साथ प्रयोग गर्न सकिँदैन: यो गंभीर विषाक्तता सक्छ। एउटै परिणाम दवादारू र स्वागत प्रदान गर्न सक्छन् हृदय glycosides। को चिकित्सा मांसपेशी relaxants को प्रभाव बढ्छ। म वजन "Furosemide" को लागि दबाइ पिउन सक्नुहुन्छ? डाक्टर को समीक्षा पूर्ण वजन लागि यो उपकरण प्रयोग devshek कथनहरू खण्डन। यसलाई वजन छैन, तर जो स्वास्थ्य खतरनाक हुन सक्छ पानी, गुमाउन।
दबाइ "Diuver"। निर्देशन
को रूसी बराबर "रेनियइ।" analogues मा समीक्षा "रेनियइ"
बच्चाहरु को लागि वस्त्र आकार - सानैदेखि सोह्र गर्न
सामान्य घर ताप मीटर: स्थापना र प्रमाणिकरण